Zvaungaite kudzivirira kutapurirwa HIV | Kwayedza
03 May, 2019 - 00:05	 2019-05-02T20:22:14+00:00 2019-05-03T00:03:33+00:00 0 Views
KANA uri munhu ari kurarama neutachiona hweHIV, chinhu chakakosha chaungaita kuti unge uchidzivirira kutapurirwa kurarama zvine utano uchitora mishonga yako yakadai semaAnti-Retroviral Therapy zuva nezuva sekunyorwa kwazvinenge zvakaitwa nemachiremba.
Zvimwe zvakakosha ndezvinovetera.
Kana uine utachiona hweHIV, une nzira dzakawanda dzekuzvichengetedza nadzo sedzinotevera:
Kushandisa makondomu – Kunobatsira zvikuru mukudzivirira kutapurirwa kana kutapurira HIV. Makondomu anoshandiswa nguva nenguva apo unopinda munyaya dzepabonde. Dzidza nzira kwadzo dzekushandisa makondomu echidzimai neevarume.
Deredza huwandu hwevanhu vaunopinda navo pabonde – Izvi zvinobatsira mukuderedza mikana yako yekutapurirwa utachiona hweHIV.
Taura nachiremba nezvechirongwa chePEP — Kutora mishonga inodzivirira kurapurirwa HIV kwakakosha. Mishonga iyi inogona kutorwa zuva nezuva uye inobatsira kana usina utachiona hweHIV asi uine mudikanwi anenge aine HIV kana kuti usingazivi mamiriro ake.
Tora mishonga yePEP mukati memaawa 72 mushure mekupinda panyatwa yekutapurirwa HIV. Mishonga yePEP inogona kutorwa mukati memazuva matatu kana kuzoenderera mberi nekuitora kamwechete kana kaviri paawa rimwe nerimwe mumazuva 28.
Kuchecheudzwa kwevarume —Ongororo yakaitwa inoratidza kuti varume vanokwanisa kuderedza mikana yekutapurirwa HIV kana vachinge vakachecheudzwa nechikamu che60 percent.
Ongororwa zvirwere zvepabonde uchikurudzirawo vamwe.
Kana usina utachiona hweHIV asi mudikanwi wako ainahwo, mukurudzire kuti ange achinwa mishonga yake nenguva achinovhenekwa huwandu hwemasoja anorwisa zvirwere mumuviri.